Ingabe wena uthanda izithelo? Uma kunjalo, cishe uyazi eziningi zokupheka okuthakazelisayo futhi yokuqala lapho bajwayele njengoba isakhi esiyinhloko. Kodwa uke ubone yini wezwa amawolintshi ethosiwe? Ngempela, inhlanganisela engavamile kakhulu. Phela, ngokuvamile izithelo ezisawolintshi sisebenzisa njengoba ukugcwaliswa amaqebelengwane kanye nama-dessert, kanye izithelo salads. Kodwa ungabi ngakho ngokushesha ukwenqaba kakhulu umbono soqobo. Lokhu dish kungaba umhlobiso wangempela netafula, nezinkwa izivakashi uzobe elwela ukuba adumise wekhaya yesimanje. Ngemva orange okugazingiwe kungaba esihlwabusayo kokuvamile, uma uzilungiselele kahle. Ake sizame ukuba babekele eceleni zokupheka evamile futhi pamper abathandekayo babo into ezingavamile.
- apula (ukuphindwa kabili kwaleso zohlobo);
- Madeira, noma emhlophe juice (1 ingilazi ukunambitha);
- iqoqo izinongo (kungesiwo ukuthatha ebukhali kakhulu uvalelele ukunambitheka ethambile futhi amnandi ngaphezulu);
- brandy noma nge-vodka e inani 1 tbsp. nezinkezo;
- kanye nohlaka kungcono ukusebenzisa ijusi okwase kusele ngemuva ukupheka inyama (ungasebenzisa noma yikuphi lamafutha okupheka, kanye eyenziwe ngamafutha nebhotela).
Qhubekisa ngokuthwebula ngqo inqubo ukupheka. izitsha Zezıhlabane amawolintshi kungukuthi senziwa ngaphandle kokucabangisisa, ngakho-ke sicela amabutho, isineke nesikhathi khulula. Esihle kulungele epanini ukuthosa nge amafutha noma uwoyela. On yalala lisikiwe ezisawolintshi imibuthano. I ukushuba esethatha ucezu ngalunye kufanele kube cishe 5-6 amamilimitha angu ukuba orange ethosiwe ofakwe kahle ayo ashisayo. Gcina kuze umlilo kuze kube yilapho omunye flank Uthola segolide caramel umbala. Ngemva kwalokho, imbewu yesithelo ngobumnene Pheqa phesheya futhi imenze ngezinga elifanayo yokuwugazinga. izingcezu kakhulu mncane kungaba nzima kakhulu ukuhambisa, ngaphezu, bangase balahlekelwe juiciness yabo. Uma orange okugazingiwe babeyoba abakulungele, ukususa tincetu kusukela pan ukuthosa wazigqokisa isidlo lelungiselelwe.
Apples kufanele usike amacembe mncane. Awukwazi zizosuswa kusuka izikhumba zazo, njengoba enqubeni ukupheka ithenda futhi ezihlwabusayo kakhulu. Futhi yokosela, kodwa on ukushisa high. Izithelo kudingeke sihlokoloze njalo, ngakho ungayishisi. Linda kuze kube yilapho apula zithambile. Nokho, Ungeqisi ukuba isimo iphalishi, uthwebule isikhathi. Badinga ukwengeza usawoti kanye pepper, engeza iqoqo izinongo. Efaneleka kakhulu lapha kuyoba clove ukhari omisiwe. Basuke ngosile orange yayiyoba ukunambitheka elimnandi kanye engavamile kakhulu. Sifaka kule ngxube esincane emhlophe juice (noma Madeira) futhi cishe ngokushesha (ngomunye ngomzuzu) uthele utshwala. Kufanele kwenziwe ngokucophelela futhi kancane, ukuze singathwesi iwele emlilweni. Kungenjalo kunengozi lunokukhanya eqinile. Futhi in a Skillet vysokogradusnye iziphuzo liziphathe ukubuyisa kakhulu.
Konke lokhu kufanele axoshwe kule pan imizuzu embalwa, ngemva kwalokho ungakwazi ulayishe amawolintshi futhi. Fry kuhamba phambili ngaphandle lid, ngisho noma ukushisa eliphezulu le okungavamile elinuka-okubabayo rainbow wonke uyobe ngobudlova encimfelwayo futhi "ngokudubula" amafutha hot. Khona-ke isithelo iyoba omnandi futhi angabi bushelelezi. Amawolintshi Engenawo Umbala kufanele baniketwe sikhatsi cwilisa apula oludakayo umoya, khona-ke isidlo, ungakwazi kakade imenze etafuleni.
ezisawolintshi eyosiwe singasebenza njengesisekelo esiqinile sokufinyelela isidlo esiseceleni, futhi umphelelisi inyama zokupheka ekhona kakade. Lokhu kuyinto dessert kakhulu amaholide afana noKhisimusi and New Year. Ngemva kwalezi izinsuku, thina ezihlobene nokusebenzelana iqinile futhi egqamile orange iphunga. Ungesabi ukuba izame ngezabelo, ukhululeke engeza izithako ezintsha kanye izingxenye. Khona-ke isidlo sakho kuyoba esiyingqayizivele futhi okumnandi nakakhulu.
Amnandi Futhi ithenda shin multivarka: iresiphi
Indlela baqede ozithandayo ewuchungechunge yethelevishini zethu phezu minyaka engu-20?
Ukufakwa kokumqoka kuphela nge-lithium-ion battery: incazelo, ukusebenza kanye nokulungiswa